Ejipta: Taratasy Iray Vaovao An’ny Blaogera Voafonja, Blaogera Roa Nafahana, Nanjary Nalaza Be Ireo Fiarahana Manao Blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2018 5:53 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Français, 日本語, English
( Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2007)
Manorata ho an'i Karim ao am-ponja
Mandefa antso iray ny Wa7damasrya [Arabo] mba hanaporofoan'ny tsirairay ny fanohanany an'ilay blaogera Karim Amer, voaheloka efatra taona noho ny fitenenan-dratsy ny finoana silamo sy fanalàmbaraka ny Filoha Ejiptiana. Manoratra eo amin'ny blaoginy izy fa naharay taratasy iray vaovao avy amin'i Karim, hoe mila fanohanana izy mba hanome hery sy fampiononana ho azy. Mihevitra izy fa teny kely iray dia tontosa izany. Navoakany ny adiresin'i Karim ao am-ponja, ho an'ireo olona izay maniry ny handefa taratasy ho azy.
Departemanta 24 Efitra faha 10
Mikasika an'io olana io hatrany, mitatitra ny blaogy Free Kareem[En] fa tsy naharaisana valiny mihitsy, na dia filazaàna faharaisana aza, ny taratasy iray nalefa ho an'ny ambasadin'i Ejipta ao Romania, fangatahana azy mba hanelanelana amin'ny anaran'i Karim sy hitakiana ny famotsorana azy..
Fandefasana sarimihetsika tao amin'ny foiben'ny antoko Al-Ghad: milaza ny 7rnksh [En] fa ny antoko Al-Ghad dia manomana fihetsiketsehana roa: “Ny kanton'ny firenentsika ho an'ny vahoakantsika” sy ny “Ndeha hjery ireo sarimihetsika novokarintsika”, amin'ny 19 Jolay ao amin'ny foiben'ny antoko.
Ilay mpitarika politika voafonja Ayman Nour no mpitarika ny antoko Al-Ghad. Tamin'ireo fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny taona 2005, nirotsaka ho filoham-pirenena izy nifanandrina tamin'ny Filoham-pirenena niala Hosni Moubarak . Nahiditra dimy taona tany am-ponja i Ayman Nour noho ny fiheverana azy ho nanao antontan-taratasy hosoka.
Nanjary nalaza be ireo mpiara manao blaogy: Ao anaty lahatsoratra iray, amafisin'i Hany George avy amin'ny blaogy Bikya [Arabo] fa lasa miha-mahazo vàhana ny fiarahana manoratra bilaofy ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy ejiptiana. Zavatra tsara no fahitàny ny fiarahamisan'ireo bilaogera. Hany George izay mino ny fiarahana manoratra bilaogy, dia mandray anjara koa ao amin'ny tama7eek, famoahan'ireo bilaogera lahatsoratra iray isankerinandro, na isambolana.
Anatin'ny fahamailoana faratampony ny fiarandalamby ambanin'ny tany ao Kairo: Ny blaogin'i Manfa [Arabo] dia manoritsoritra ireo fepetra napetraka ho fiarovana tamin'ity herinandro ity, taorian'ilay fikasàna hanao fanafihana iray amin'ny baomba tao anatin'ny fiarandalamby ambanin'ny tany tao Kairo, saingy tsy tanteraka. Voasava avokoa ireo olom-pirenena rehetra mitondra kitapo noho ny fiarovana ary amin'ny tranga sasantsasany dia tsy maintsy mampiseho ny karapanondrony ireo hafa. Gaga noho ireo dingana ireo i Manfa, indrindra indrindra fa mandray fiarandalamby ambanin'ny tany foana izy sady mitondra kitapo noho ny asany. Mitantara izy fa ireo olona izay milahatra ampaharetana mba ho savaina dia tsy mitsahatra manontany izay zava-mitranga, izay valian'ireo mpitandro filaminana hoe “tsy misy na inona na inona”. Amina fotoana iray tena saropady, heveriny ho valinteny sahaza ho an'ireo ahiahin'ny vahoaa io valinteny io.
Blaogera roa navotsotra: manamafy ny fanafahana blaogera roa nosamborina vao haingana i Tahyyes [Arabo]: i Moataz Adel sy Ahmed El-Geizawy. Nosamborina ireo blaogera roa ireo raha tena an-dàlana handeha hanaraka fitsaràna ara-miaramila iray. Tehaka ho an'ny famotsorana azy ireo!
Izay no fijerena an'ireo blaogin'i Ejipta. Handao anareo miaraka amin'ireo vaovao tsara aho ary manome fotoana anareo ho amin'ny herinandro indray !